Tsamba Yechipiri kuvaKorinde 5:1-21
Kupfeka imba yekudenga (1-10)
Ushumiri hwekuyananisa (11-21)
Chisikwa chitsva (17)
Nhume dzinomiririra Kristu (20)
5 Nekuti tinoziva kuti kana imba yedu yepanyika, iro tende rino, ikaparadzwa,+ tichava nechivakwa chinobva kuna Mwari, imba isina kuvakwa nemaoko,+ inogara nekusingaperi, kudenga. 2 Nekuti muimba ino tiri kugomera, tichishuva nemwoyo wese kuti tipfeke yedu inobva kudenga,+ 3 kuti kana taipfeka, tirege kuzowanikwa takashama. 4 Tingatoti isu tiri mutende rino tiri kugomera, tichiremerwa, nekuti hatidi kuribvisa, asi tinoda kupfeka rimwe racho,+ kuitira kuti chinofa chimedzwe neupenyu.+ 5 Akatigadzirira chinhu ichi ndiMwari,+ uyo akatipa mweya sechekufanobata chezvichauya.*+ 6 Saka tinoramba takashinga uye tinoziva kuti panguva yatiine musha wedu mumuviri, tiri kure naShe,+ 7 nekuti tiri kufamba nekutenda, kwete nekuona. 8 Asi takashinga uye tingatoda kusava mumuviri kuti tive nemusha naShe.+ 9 Saka tingava tiri kugara naye kana kuti tiri kure naye, chinangwa chedu ndechekuti tive vanhu vanomufadza. 10 Nekuti tese tinofanira kumira pamberi pechigaro chekutonga chaKristu, kuti mumwe nemumwe apiwe zvinoenderana nezvaakaita paakanga achiri mumuviri, zvingava zvakanaka kana zvakaipa.+ 11 Saka sezvo tichiziva kutya Ishe, tinoramba tichinyengetedza vanhu, asi isu tinonyatsozivikanwa naMwari. Asi ndinovimba tinonyatsozivikanwawo nehana dzenyu. 12 Hatisi kukuratidzai zvakare kuti tiri vanaani, asi tiri kuita kuti muve neshungu dzekuzvirumbidza pamusoro pedu, kuitira kuti mukwanise kupindura vaya vanozvirumbidza pamusoro pezviri kuoneka nechekunze+ kwete zviri mumwoyo. 13 Nekuti kana takanga tarasika pfungwa,+ taizviitira Mwari; kana tiine pfungwa dzakakwana, tiri kuzviitira imi. 14 Nekuti rudo runa Kristu runotimanikidza, nekuti aya ndiwo maonero atakaita, kuti munhu mumwe chete akafira vanhu vese;+ saka vese vakanga vafa. 15 Uye akafira vanhu vese kuti vaya vanorarama varege kuramba vachizviraramira,+ asi vararamire iye akavafira, akamutswa. 16 Saka kubvira iye zvino hatichazivi munhu maererano nezvaari panyama.+ Kunyange zvazvo takamboziva Kristu panyama, chokwadi haasisiri iwo maziviro atinomuita.+ 17 Saka kana munhu akabatana naKristu, ava chisikwa chitsva;+ zvinhu zvakare zvakapfuura; onai! zvinhu zvitsva zvavapo. 18 Asi zvinhu zvese zvinobva kuna Mwari, uyo akazviyananisa nesu achishandisa Kristu+ ndokutipa ushumiri hwekuyananisa,+ 19 hwekuti Mwari akanga achizviyananisa nenyika achishandisa Kristu,+ asingavaverengeri zvitadzo zvavo,+ uye akatipa shoko rekuti tizivise nezvekuyananiswa.+ 20 Saka tiri nhume dzinomiririra+ Kristu,+ sekunge kuti Mwari ari kukumbira vanhu achitishandisa. Sevamiririri vaKristu, tiri kukumbira vanhu tichiti: “Yananiswai naMwari.” 21 Mwari akaita kuti uya akanga asingazivi chivi+ ave chivi* achiitira isu, kuti tive kururama kwaMwari pachishandiswa iye.+
^ Kana kuti “chibayiro chechivi.”